Indlu yelizwe eLa Carolina, eSan Luis - I-Airbnb
Indlu yelizwe eLa Carolina, eSan Luis
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguNora
UNora unezimvo eziyi-29 zezinye iindawo.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uNora iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Wamkelekile kwi-El Rincón del Poeta! -Ikhaya-
SiseLa Carolina, idolophu ezolileyo kunye neyodwa yemigodi ekwii-Sierras Puntanas, iikhilomitha ezingama-80 ukusuka kumbindi weSan Luis.
Indlu yethu yeLizwe ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ebanzi kwaye eqaqambileyo.
Ilungele uhambo lwentsapho kunye / okanye amaqela afuna indawo ekhululekile kunye nekhululekile entliziyweni ye-Sierras Puntanas.
Siyakumema ukuba wonwabe egadini, iintaba, umlambo, ukuzola noxolo olunikezwa yidolophu yethu entle :)
Le ndlu inezixhobo zangoku njengoko ukwakhiwa kwayo kutsha nje.
Izithuba ezibanzi kunye nokukhanya kwendalo okumnandi:
- Igumbi lokuhlala linezitulo ezibini / iibhedi ezingaphantsi, ezenza iibhedi ezi-4 zabantu abangatshatanga.
- Ikhitshi eligcweleyo elinazo zonke izinto, i-oveni, iketile yombane, ifriji kunye namanzi ashushu.
- 2 amagumbi okuhlambela agcweleyo: enye kwigumbi lokuhlala kunye nenye kwisuite.
- Igumbi eliPhambili: kunye nebhedi ye-Queen Size kunye negumbi lokuhlambela eline-en suite.
- Igumbi leSekondari: kunye nebhedi enye + ibhedi.
- Amagumbi aneegunjana zokushiya iimpahla kunye nempahla.
- Kukho indawo yebarbecue yokusetyenziswa okuqhelekileyo kunye noxanduva londwendwe ngalunye.
-Indlu ineenkonzo zeDirecTv kunye neWifi *
* (ezi nkonzo zixhomekeke kwimozulu - khumbula ukuba sisembindini weentaba: unxibelelwano lwe-intanethi alufani nesixeko, kwaye amaxesha amaninzi kukho ukusikwa ngenxa yemozulu engaphaya kwamandla ethu)
- Inkonzo ibandakanya amaphepha kunye neetawuli.
** Ibhedi eyongezelelweyo inikezelwa kwigumbi lokuhlala kwiindwendwe ze-10 ukuba kuyimfuneko **
** Isidlo sakusasa asifakwanga **
\_ Imbali encinci \_
ILa Carolina yaqala ngo-1792, unyaka apho yasekwa yiMarquis yaseSobremonte ngoko, ngembeko yomfazi kaCarlos III waseSpain.
Le dolophu yakudala yaba nencopho yayo embindini wenkulungwane yeshumi elinesithoba, xa kwafunyaniswa ukuba kwavela eyona golide yasendle elaye labandezeleka ngayo ilizwe.
Kungekudala, umsebenzi wokuqala wokwembiwa kwemigodi ubangele ukuba iinkampani zamaNgesi neSpanish zeza kulo mmandla ukuza kukha igolide eyayigcinwe ezintabeni.
Ejikeleze lo msebenzi, izindlu zamatye ezisahlala namhlanje zaqala ukwakhiwa, kunye nezitrato ezimxinwa eziphela kwiitonela ezimnyama, apho abavukuzi bangena khona befuna i-mineral exabisekileyo.
Emva kwenqanaba lokuxhaphazwa okuphezulu kwemigodi, elona nqanaba liphumeleleyo ledolophu nalo liphela.Iimpungutye ezinomhlwa, isinyithi esijijekileyo, itonela elahliwe, iindawo zokugcina iimpahla ezitshatyalalisiwe kunye nabantu abaphila ngaphandle kwenkumbulo yephupha elenzelwe okwethutyana ukuba libe yinyani.
Namhlanje, ukutyelela eLa Carolina kukuthatha uhambo lokubuyela emva.
Izindlu zamatye, umlambo, kunye namabhodlo omgodi oshiyiweyo, zenza le ndawo ilungele ukhenketho lwemigodi kunye nokucamngca, ngokuqhagamshelana ngokupheleleyo nendalo.
/ Indawo yokuhlala /
Kummandla we-complex, unokuva ukumbombozela komlambo waseCarolina, kunye namanzi acacileyo, ahamba kunye nesithembiso se-panning yegolide kwezinye zezi ntsuku.
Kufuphi, iindlela zeSierras ezikhokelela phezulu.
Indlu yethu yelizwe ngamanyathelo nje ukusuka kumlambo, kufuphi kakhulu nenduli yaseTomolasta, iMyuziyam yeMibongo kunye neevenkile ezikuloo ndawo.
I-landscape inobuhle besinye, indawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokucamngca, kude nesaqhwithi saso nasiphi na isixeko.
Kwakhona efanelekileyo kwimisebenzi adventure, ezifana Babehamba, Mountain Bike, Cabagatas, Hiking, Ukutsiba, Fishing, Trip kwi-Gold Mine, khangela igolide emilanjeni, Anti Ruca (Llama basezifama), okanye utyelelo kwiindawo yemifuziselo le I-Sierras efana ne-Inti Huasi, i-grotto eneminyaka eyi-8,000 ithathwa njengenye yezona ndawo zibalulekileyo ze-archaeological sites ngaphambili.
Umbuki zindwendwe ngu- Nora
NguVerónica oya kubamkela aze abekho kuzo.
Ngenye indlela ndiza kube ndizimasa (Nora). Indlu yam ikwipropati enye. Nantoni na oyifunayo ungabonisana nam okanye uVerónica.